Tele RELAY တစ်ခု 27256 ရေးသားချက်များ0မှတ်ချက်များ
RTL ၏သတင်းစာကို RTL ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ တွင် RTL.fr. တွင်ရှာပါ။ ဤဗွီဒီယိုသည် https://www.youtube.com/watch?v=29kPPyndA2020M တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
Copyright de l'image Gouvernement luxembourgeois…
Fally Ipupa: သူမ၏သားဖြစ်သူသည် sextape ကိစ္စ၏အဓိကနေရာဖြစ်သည်
Une vidéo à caractère sexuel du fils du célèbre chanteur congolais Fally Ipupa circule sur les réseaux sociaux depuis le dimanche 23 février. Dans la vidéo compromettante, on peut identifier Marcosins Ipupa en pleins...
Celebs Go ချိန်းတွေ့ခြင်း၏ရော့ဘက်ဘက်သည်မေီ၏နောက်ခံတွင် 'လိင်တံ' ကိုပြသည်။
LIVE Transfer Talk: Man ယူနိုက်တက်သည်ပေါင် ၆၀ သန်းဖြင့် Chiesa ကိုပစ်မှတ်ထားသည်
ဆောင်းရာသီအပြောင်းအလဲပြတင်းပေါက်ပိတ်ထားပေမယ့်ယခုနွေရာသီကိုကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ! ဒီနေရာမှာဥရောပလိဂ်ကြီးတွေနဲ့ကျော်လွန်ပြီးကောလာဟလအသစ်တွေထပ်မံထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ Top Story: Man United ကိုသန်း ၆၀ အထိပစ်မှတ်ထားပြီး…
Novelas အပိုင်း - ပြင်သစ်ပြင်သစ်ရှိအကျဉ်းချုပ်ရူပဗေဒနိဂုံး (မာရီယာ၏လက်ထပ်ခြင်းနှင့်…
ကြော်ငြာကိုဒီမှာကြည့်ပါ - http://www.utip.io/novelasshowfr အကျဉ်းချုပ်တိုတောင်းသောနောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်အပိုင်း ၂ အပိုင်း ၂ Subscribe👉: https: //www.youtube.com/channel/UCLK2fXkaZKuIhRhcOM2h4w စာမျက်နှာ ...
Télénovelas😤၏ ugliest စုံတွဲများ။ - ဗီဒီယို
Telenovelas အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအဓိကစုံတွဲကအိပ်မက်၊ လိုချင်မှုနဲ့အလှအပကိုဖော်ထုတ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Manuella, Angel, maria désemparadaနှင့် maximiliano ကဲ့သို့သောစုံတွဲများသည်အောင်မြင်စွာအောင်မြင်ခဲ့လျှင်၊
Coronavirus: Pitié-Salpêtrièreမှဆရာဝန်တစ် ဦး ကဤအခြေအနေသည်သင့်လျော်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်မြင့်တက်နေပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတင်တွေ့ရှိချိန်နှေးကွေးသည်။ ကပ်ရောဂါသည်ဥရောပသို့ပျံ့နှံ့သွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
Foot OM - OM: Pipa Benedetto အတွက် MacHardy အတွက်ရည်မှန်းချက် ၂၀ ။ - FOOT 20
လီဂူး ၁ တွင်ဂိုး ၁၁ ဂိုးဖြင့်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးNîmesကိုအနိုင်ယူပြီးနောက်တွင် Dario Benedetto သည် Olympique de Marseille အသင်းအားချန်ပီယံလိဂ်အတွက်ရွှေလက်မှတ်ရရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုသို့လောင်ကျွမ်းသည်။ Jonatan MacHardy တွင်မိန်းကလေးဘက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော 1234...2726 လာမယ့်